बर्षकै व्यस्थ नवनायिका | OnlineChautari.com
बर्षकै व्यस्थ नवनायिका
April 12, 2016 | 3:30 pm
काठमाडौं । नेपालका धेरै नायिकाहरु नव बर्षको शुरुको दिनमा आ आफ्नै कार्यक्रमहरुमा ब्यस्थ देखिन्छन् । कोहि नायिकाहरु नयाँ चलचित्रको शुटिङ्मा व्यस्थ, त कोहि बिभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा व्यस्थ । यो त हाम्रो लागि कुनै नौलो बिषय भएन ।
आज हामी एक यस्तो बिषयमा प्रवेश गर्दैछौं, जहाँ एक नवनायिका शुटिङ र साँस्कृतिक कार्यक्रममा नभई हरेक दिन जस्तै काठमाडौंको सुन्धारा, रत्नपार्क हुँदै छाउनी, सितापाईला रुटमा टेम्पो चलाउन ब्यस्थ छिन् । उनी हुन् चलचित्र टेम्पो चालककी नायिका कोपिला तमाङ ।
अनलाईन चौतारीको टीम उनलाई भेट्न उनको टेम्पो ग्यारेज पुग्दा विहानको ६ बजेको थियो । कोपिल सधै झै आफ्नो टेम्पो सरसफाईमा ब्यस्थ थिईन् । हामीलाई देखेपछि उनी आश्चार्य मानिन् । उनलाई सोधियोः बर्षको अन्तिम दिनमा पनि तपाई टेम्पो चलचउर्दै हुनुहुन्छ ? उनले सोझो जवाफ दिईन्ः ‘टेम्पो नचलाए के गर्नु ?’
चलचित्र टेम्पो चालकको प्रदर्शन पछि तपाई बिभिन्न मिडियामा छाउनुभयो है ? हाम्रो जवाफको उत्तर दिदै उनी भन्छिन्ः ‘खै साथीभाईले त भन्दै थिए । इन्टरनेटमा पनि आएको थियो रे । फेसबुक र एउटा पत्रिकामा मैले पनि देखेको थिए । टेम्पो चलाउनमै ब्यस्थ हुन्छु । त्यति ईन्टरनेटमा बस्दिन । मलाई त थाहै हुँदैन । ‘
उनलाई हाम्रो अर्को प्रश्न थियो, चलचित्र प्रदर्शनपछि तपाईको टेम्पो चड्ने यात्रुहरुले टेम्पो चालककी नायिका भनेर चिन्दैनन्?
‘शुरुमात चिन्दैनन्’ । लज्जालु पाराले उनले भनिन् ‘टेम्पोमा रहेको चलचित्रको पोष्टर हेरेपछि यी नायिका र तपाईको अनुहार मिल्छ नी, कतै तपाई नै त होईन भनेर सोध्छन् । मैले पनि हो भन्ने जवाफ दिन्छु । त्यसपछि यात्रुहरुले थप कुराकानी गर्न खोज्छन् । चलचित्रको बारेमा सोध्छन् । कसरी चलचित्र खेल्नुभयो भन्ने जिज्ञासा राख्छन्’ ।
कोपिला गफिदै गईन् , ‘मैले पनि वहाँहरुलाई यो एउटा बास्तविक कथाबस्तुमा आधारीत र हामी टेम्पो चालकहरुलाई सम्मान गर्ने कथाबस्तु भएको हुँदा मैले यसमा अभिनय गरेको बताउछु’ ।
अरु के छ त चलचित्र टेम्पो चालकमा ? हाम्रो प्रश्न थपिदै थियो । कोपिलाले भनिन्, ‘मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा बनेका चलचित्रहरु मध्ये यो पहिलो तीनभाषे चलचित्र हुनुपर्छ । जहाँ नेवार संस्कृति र तमाङ संस्कृतिलाई जस्ताको त्यस्तै देखाएको छ’ ।
यो चलचित्र युनिटसँग तपाईको भेट कसरी भयो त ?
‘म टेम्पो चलाउँदै थिए ‘। कोपिलाले बेलिबिस्तार लगाउदै अगाडि बढिन् । ‘अचानक चलचित्रका निर्माता गंगा नेम्कुल मेरो टेम्पोमा चड्नुभयो । वहाँ भर्खरै अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आउनुभएको रहेछ । वहाँको सपना हामीजस्तै महिला टेम्पोचालकको सम्मानमा यसै बिषयमा एउटा चलचित्र निर्मार्ण गर्ने । त्यसको लागि वहाँले मलाई मद्दत माग्नुभयो । मैले नचिनेको मान्छे भएको हुनाले शुरुमा वहाँलाई कुनै बचन दिईन । बिस्तारै वहाँले चलचित्रको बारेमा पुर्णरुपमा जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि नेपालका चर्चित हास्यकलाकार रवी डंगोलसँग भेट गराई भन्नुभयो चलचित्र टेम्पो चालकको निर्देशक वहाँ नै हो । त्यसपछि भने मैले पूर्ण रुपमा बिश्वास गरे ।’
टेम्पो चलाउन र अभिनय गर्न कुन सजिलो रहेछ त ?
कोपिला भन्छिनः ‘टेम्पो त मैले सधै चलाउदै आएको पेशा, सजिलो भैहाल्छ नी । अभिनय त पहिलो पटक गर्दै थिए । साह्रै गाह्रो लाग्यो, तर चलचित्रको निर्माण टिमको सहयोगलेनै मैले चलचित्र गर्न सके । ‘
भोली नयाँ बर्षको पहिलो दिनको ब्यस्थता के छ त ?
‘नयाँ बर्षको पहिलो दिन मात्र होईन म त बर्षभरी नै टेम्पो चलाउनमै ब्यस्त हुन्छु ‘। आफ्नो पेशमा गर्भ गदै कोपिलाले भनिन् ।